Ndiza kuvuma… isibhengezo samva nje se hlukala phakathi kweTwitter kunye neLinkedIn kufudumeze intliziyo yam. Abantu abasayi kuphinda babenakho nje ukungaphefumli ngokuhlaziya ii-Twitter zabo kwi-LinkedIn ngaphandle kokungena kunye nokuzibandakanya.
Ngelixa ndisazi ukuba abanye babelana ngam glee, zeziphi izinto ezilungileyo nezingalunganga zokunxibelelanisa iakhawunti yakho ye-Twitter nezinye iinethiwekhi? Kuba i-Facebook isavumela lo mkhuba, isenzeka. Ngelixa iqhuba amandongomane, ndiya kuvuma ukuba kukho izibonelelo ezithile if isetyenziswe ngokuthobekileyo-kodwa phantse kube njalo.
Ke zithini izinto ezilungileyo?
Isebenza ngokufanelekileyo. Akunakuphikwa ukuba sonke siyaxakeka kwaye sinexesha eliqingqiweyo lokugcina uthungelwano oluninzi lwasentlalweni. Ngokuthumela ngokuzenzekelayo ukusuka kwenye ukuya kwelinye, ngokuqinisekileyo ulonga ixesha. Isikwe kakuhle kwaye yomile.
Ukongeza, ukuba uyathengisa kwimidiya yoluntu, iyakwandisa ukufikelela kwakho. Nangona kunjalo…
Enye yeendlela ezisezantsi zokudibanisa ezi akhawunti kunye "yinto engaqhelekanga yes syntax". Ukuncokola kuTwitter kubandakanya iisimboli ezithile kule nethiwekhi, njengeesimboli "@" kunye nee-hashtag (jonga: yintoni i-hashtag?). Ukuba abasebenzisi be-Facebook bababona aba balinganiswa kwiindaba zabo zokutya, ubeka umngcipheko wokubahlukanisa kuba iiposti zakho zibonakala zididekile kwaye zingaqhelekanga. Oku kunciphisa ukubandakanyeka.
Ukongeza, ukusetyenziswa ngokukuko kwemithombo yeendaba kwezentlalo kuhlala kubandakanya phu laphule, Kwaye ukuba unqamleza unxibelelwano ngohlaziyo ke awunasizathu sokungena kwaye uthethe nabani na. Ubambekile imowudi yosasazo.
Kubi xa usiya kwelinye icala, nako. Ndibona abantu abatyhala uhlaziyo lwabo kuFacebook kuTwitter, ngokunjalo, neziphumo zohlaziyo olunqunyulweyo (njenge lo) okanye eyona nto imbi nangakumbi, amakhonkco enkedama ngaphandle kwengcaciso (njenge lo).
Okokugqibela-kuyacaphukisa nje, akunjalo? Asidinwanga kukubona ubuhlaziyo besimo esonqenayo sigcwele iisimboli ezingaphandle komxholo kunye neetweets ezincitshisiweyo
Seta iiProfayili zakho simahla
Ndingacebisa ukuthatha eli thuba ngokuzikhethela ukunganxibelelanisi iiakhawunti zakho ze-Facebook kunye ne-Twitter kwaye uqale ngokwenyani ukuthatha inxaxheba kwinethiwekhi nganye ngenjongo. Ndixela kwangaphambili ukuba uza kubona amanqanaba aphezulu okuzibandakanya kwaye uya kuwasebenzisa ngendlela ebecwangciswe ngayo: njenge zentlalo amanethiwekhi.
tags: FacebookLinkedInImidiya yokuncokolaTwitter
Phakamisa amanani abaThengi ngoPhononongo lwePlagi
Jul 1, 2012 ngo-12: 10 PM
Ndiyoyika ukuba akukho ndlela ndiza kubasusa ngayo kwikhonkco. Sityhala itoni yomxholo kwaye injongo ayisoloko ikhuthaza incoko-amaxesha amaninzi kukubonelela ngolwazi kubaphulaphuli bethu. Ngale ndlela, iqhinga eliyimpumelelo. Ngelixa ndingathanda ukuhambisa umyalezo wonke kwaye ndihlale kwimithombo yeendaba imini yonke… andilinikwa elo thuba.
Jul 1, 2012 ngo-8: 06 PM
Ndicinge ukuba uza kuthi, Doug 🙂 Sonke sisebenzisa amanethiwekhi onxibelelwano ngokuhlukileyo kwaye ukuba injongo yakho kukusasaza ke ingqiqo yakho iyavakala. Ngokuqinisekileyo ndinokhetho (ngokucacileyo) kodwa oko akuthethi ukuba kukho "ekunene" okanye "akulunganga".
Jul 1, 2012 ngo-8: 03 PM
Ndicinga ukuba ukungazinxibelelanisi ngumbono omkhulu. Kuya kufuneka ndivume ukuba bendihlala ndizidibanisa kodwa ndaye ndabona ukuba awunawo umxholo omtsha kwiqonga ngalinye njengenxalenye yentengiso ekwi-Intanethi ke abantu abanasizathu sokulandela iakhawunti nganye.
Jul 2, 2012 ngo-10: 12 AM
Imithombo yeendaba ezenzekelayo izongela ixesha, kodwa inokuthatha into ukuba awalumkanga. Kungaba lula ukupapasha umyalezo ofanayo kwinethiwekhi usebenzisa izixhobo zemidiya yoluntu kodwa kuya kufuneka ukhumbule ukujonga iakhawunti nganye kwaye uphendule xa kukho imibuzo. Awunakho "ukuseta kwaye ulibale".
Jul 3, 2012 ngo-7: 18 AM
Ndiyavuma ngokupheleleyo. Igcina ixesha kwixesha elifutshane, kodwa inefuthe elibi kwixesha elide. Ayibonakali imdaka kuphela, kodwa iyahamba ngokuchasene nesiseko sayo yonke imidiya yoluntu.